Abadlali of the ifilimu "Iyisela izincwadi." Uphenyo movie
Impi idrama "Iyisela izincwadi," esiqintini okuyinto wahamba ethi Australian UMlungisi Zusaka kwathathwa kunalokho ambiguously. Voice ngetetsamelilwati baxgeki zazihlukaniswe, wasethula ibanga kusuka ezimbi kakhulu ukuze kujabule ngokuphelele. Isikrini lithathelwe amanoveli, ukuba umsebenzi awubongwa Nokho, angeke sikujabulele ifilimu kuphela Izibuyekezo womuntu Ikakhulukazi wathi lo mdwebo ine yabalingisi ezithakazelisayo, okuyizinto futhi uzoqhubeka yaziwa.
"Iyisela amabhuku" - ifilimu (abalingisi, impendulo izilaleli - ku), alengayo esekelwe zokuthumela umbhali M. Zusaka "The Book Isela", owawusendaweni ohlwini bestseller zenguqulo «I-New York Times» amasonto angaphezu kuka-230. Ukuze incwadi lithathelwe wathatha umqondisi British Brian Percival, ngubani ayedumile ngemva abasebenza uchungechunge sethelevishini "iNyakatho neNingizimu" futhi "Downton Abbey."
Imicimbi kuboniswe ifilimu, nguye owasungula ngo-1938, lapho amaJalimane kwaba ngobusuku bangaphambi lwalesi sibhicongo, maduze umhlaba wonke kwafaka waba nezinxushunxushu. Voice-phezu, etshela izilaleli ukuthi umlando imidlalo ebanga usizi, kungokwalabo akekho omunye, njengoba ingelosi yokufa, arhola ukunaka kwakhe entombazane kakhulu Liesel Meminger. Uma emkhayeni ekungeyona eyakhe, azifundayo ukufunda, futhi incwadi uyogcina babe izindlela esiyinhloko ukwazi kwakhe emhlabeni futhi konke okwenzekayo.
"Iyisela amabhuku" - ifilimu (ukhonkolo nezithombe kamuva kulesi sihloko), emkhathini engavamile. Umlando mpi esabekayo futhi izimpilo ekhubazekile kuboniswe ngemehlo zamantombazane. Ingane ngisho nangaphansi kwezimo ezimbi njengale, namanje ingane, futhi lokho akubona lapho zonke ngokusebenzisa iphrizimu nokuvuleka Umusa naivety.
Abadlali of the ifilimu "Iyisela amabhuku": Sofi Neliss
Kuyaqhubeka ukuthungathwa oyiculayo Starring wazungeza izwe. Ekugcineni, inhlanhla eyawa abasha actress Canadian Sofi Neliss, samukelwa kuphrojekthi Februwari 4, 2013. Ekuqaleni ukuqopha eseneminyaka engu-13 ubudala, kodwa iphrojekthi wayengeyena DEBUT ngenxa yakhe. Ngemuva emahlombe at S. Nelissen kwaba iqhaza ifilimu "Mnu Lazar." Sophie has udade naye wenza ama-movie.
Heroine wakhe Liesel Meminger kuphela efika kuqala kubonakale onamahloni engazethembi. Eba isigaba esisha, kukhombisa namandla emvelo, ekuvimbeleni ekuklolodelweni ontanga. Abazali Foster bafundiswa intombazane ukufunda, futhi kusukela ngaleso sikhathi waqala uthando lwakhe lwezincwadi.
Abadlali of the ifilimu "Isela amabhuku" zaziphawuleka ngokungabi iziphakamiso imiklomelo ehlonishwayo. Nokho, Sofi kuphela Neliss safinyelela ahlula won Hollywood Film Festival ne-Phoenix Film Abagxeki Society, futhi "Sputnik".
A ethandwa umlingisi Australia cinema, yaseshashalazini kanye ithelevishini, kanye Umamukeli imiklomelo eminingi, kuhlanganise "Oscar". Isibukeli, yena udume amafilimu "Shakespeare Othandweni," "Shine," "Inkulumo Wenkosi", njll isithombe wayedlala indima wokutholwa uyise Liesel -. Hans Hubermanna. Umbuso wobushiqela wamaNazi esiphazamisayo ezimpilweni zabahlali abavamile, nalawo Sikude kakhulu kwezepolitiki. Hans Fluke lakwazi ukugwema ukuboshwa, kodwa yena uthola ngaphansi isikhalazo, naphezu ubudala babo. Uma ngaphambili, waphindela cishe ngokushesha nge ukuxukuzeka, futhi mhlawumbe kusindisa ukuphila kwakhe.
"Iyisela amabhuku" - ifilimu, abadlali akhethiwe ngokuhambisana ngokuqinile ncwadi, ephethe isimo ekhethekile. Izenzakalo olunegazi we 40s zifana ekusithekeni, lokhu yini eyabangela impikiswano ifilimu a baxgeki ukubuyekezwa.
actress IsiZulu cinema kanye yaseshashalazini komculo esikrinini umfanekiso umama siphinde futhi unkosikazi Liesel Hans - Roses. Kusukela imizuzu lokuqala ifilimu, yena kwenza umbukeli umbono yowesifazane nabangenaluthando, enemikhuba ngisho kancane unonya. Nokho, njengoba kuvela lokhu kuphela imaskhi yangaphandle efihla ngenhliziyo enhle.
moviegoer Domestic actress ajwayelekile ukusebenza kumafilimu ezifana "Breaking the Waves", "Cradle Will Rock," "The Boxer," "My Pet Dinosaur", "Miss Potter." Ekhaya, e-UK, kuba abadumile ngenhla wonke umsebenzi ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini.
Max kanye Rudy
Niko Lirsh uBheni Shnettser - nabalingisi omncane ifilimu "Iyisela izincwadi." Ngemva Liesel wathutha endlini abazali abakuthola, umuntu wokuqala ahlangana - umfana kamakhelwane, kanye benamandla uzwela wakhe. Rudi Shtaynera indima eyadlalwa umlingisi Ezifuna esuka eJalimane, Niko Lirsh. Ngemuva kokuba abangane, bachitha isikhathi esiningi ndawonye, kuhlanganise ngesikhathi esifanayo ungene phakathi kwababusi i-Hitler Youth.
Nge Max Liesel wahlangana ngesikhathi Kristallnacht elidumile, lapho wonke Germany kwakukhona pogrom, ezitaladini zase zigcwele shards amawindi ingilazi esitolo. AmaNazi umbhikisho wayalwa ngokumelene namaJuda. On indima imaskhi ngumdlali American Ben Shnettser sikhethwe. Imisebenzi kule ifilimu ngaye wayeqala, izibukeli eziningi uyomkhumbula lemisebenzi elandelayo: "Ukuziqhenya," "Warcraft" futhi "Snowden".
ababukeli Guest baxgeki
"Iyisela amabhuku" - ifilimu, nabalingisi izindima, script kanye isiqondiso owawuya Izibuyekezo ngempela okuxubile ifilimu a baxgeki nezibukeli. Kuhle-ukuthengisa amabhuku, ogxile ngesakhiwo, kwacaca ukuthi, akuqinisekisi impumelelo ngokuphelele ehhovisi ibhokisi. Gamma kodwa ocebile kakhulu futhi iqukethe, njengoba ebukhali kanye ukugxeka futhi omuhle. Lathi ifilimu ilahlekelwa kakhulu incwadi, kodwa unalo ilungelo lokuthatha khona. Abagxeki Yaveza mayelana umsungulo ngokweqile isithombe, sengathi impi esidlulile, uhlelo lwesibili. Kuyinto kunalokho umkhiqizo oqondiswe izethameli yobusha. Nokho, ukugcina ukunakwa intsha amahora ambalwa kunzima ngokwanele, awunazo Dynamics.
Kahle emakwe abadlali of the film "Iyisela izincwadi." Ubufakazi balokhu kukhona iziphakamiso imiklomelo ehlonishwayo, kanye soundtrack befilimu. Umculo befilimu lalotshwa Dzhon Uilyams. umqambi American futhi umqhubi, ingenye edume kakhulu futhi ophumelelayo akagcini nje ku Hollywood, kodwa futhi emhlabeni. Engingakusho nje ukusho yokuthi wadala umculo kwamafilimu ezifana "Superman," "Jaws," "Uhlu Schindler sika", amaqhawe "Star Wars", "Harry Potter", kanye ezine Imidlalo yama-Olympic. Umqambi has Izithombe emihlanu "Oscar" futhi has kokuphakanyiswa kwamagama 50 kule umklomelo ophambili okubandakanya umculo ngoba "Iyisela izincwadi."
Vinogradov Valentin: A Biography umqondisi Soviet
Uzungu, abadali kanye abadlali of the film "uSuku Lokwahlulela"
Kuhle angaphandle umphenyi uchungechunge: uhlu nokukala
Thanda umuntu oyimpumputhe kusukela ubumba dragon nengane isencane
Daniel Spivakovsky: Biography, Filmography, ukuphila siqu umlingisi Russian (isithombe)
Flying ngamaphupho. Kusho ukuthini ezindiza kuyiphupho nje?
Abkhazia, Gagra, "Colchis". Pension "Colchis": izithombe kanye nokubuyekeza
Lapho sigubha uSuku Customs emhlabeni?
Izithelo ezincinci Izitshalo ezinobunzima: izibuyekezo zangempela